Indawo ebukekayo ebheke echibini engu-3 bdr cottage nguLac du Bonnet.
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Crystal
Ikotishi lethu elintofontofo nelibukekayo eliseceleni kwechibi liseduze nomgwaqo futhi phakathi kwezinhlobo eziningi zezihlahla futhi libheke emanzini. Ikotishi libheke ngasentshonalanga ukuze lithole ukushona kwelanga okumangalisayo nokubukwa kwechibi.
Indawo ekahle yokubaleka nabantu obathandayo futhi uchithe isikhathi esihle.
I-cottage yethu iyindawo ekahle yokubaleka futhi uphumule! Ihora elingu-1.5 ukushayela usuka eWinnipeg.
Ehlobo, jabulela ikotishi elingasechibini lapho ungabhukuda khona, udlale esikhumulweni semikhumbi, uhambe ngezikebhe, kayaking, ukuntweza emoyeni noma ujikijele ibhola.
4.62 ·29 okushiwo abanye
~IZINYANGA ZENTBUKO NEHLOBO~
Le ndawo igcwele izihlahla ezinde, ezinhle, izinyoni nezilwane zasendle ezinechibi elihle elinamanzi ahlanzekile. Ichibi lizungezwe ukubukwa okusha okuhlanganisa ukushona kwelanga okumangalisayo nokuphuma kwelanga.
E-Lac Du Bonnet kunezitolo eziningi zegrosa, ezijwayelekile, kanye ne-hardware, amabhange (RBC), izindawo zokudlela, u-ayisikhilimu, igalofu, amabha wegesi angu-3. Kukhona i-Farmers Market njalo ngoMgqibelo ekuseni (May kuya ku-September), kanye nolwandle lwasendaweni (olulungele izingane ezincane) konke okungaphansi kwemizuzu eyi-10 ngebanga lokushayela.
Eduze kunemizila yezintaba, ibhuloho leSuspension elingamamitha angama-54 ubude, iPinawa Dam Provincial Park, kanye nenkaba yedolobha iPinawa.
I-Black Bear Golf Course - 10 min ukushayela
I-Granite Hills Golf Course - 20 min drive
I-Pinawa Golf Course - imizuzu engu-20 ukushayela
Indawo inokufinyelela okuqondile emizileni yemisebenzi yasebusika njengokushushuluza eqhweni, ukushushuluza eqhweni, kanye ne-Snowmobiling.
Ukudoba eqhweni kungenziwa phambi kwekhabhinethi emanzini.
Singatholakala njalo nge-imeyili noma ngombhalo.
Sijabule kakhulu ukukusiza uma unemibuzo ngaphambi kokufika kwakho, ngenkathi ungena noma ngesikhathi uhlala ekotishi lethu :)
*Sicela usishayele uma kunesimo esiphuthumayo